जसको उपस्थितिले न्यायालय आन्दोलनमा आज खास अर्थ राख्यो :: शोभा शर्मा :: Setopati
जसको उपस्थितिले न्यायालय आन्दोलनमा आज खास अर्थ राख्यो
बिहीबार सर्वोच्च अदालतबाट बालुवाटारसम्म आयोजित 'न्याय मार्च' मा सहभागी सुकन्या वाइवा (बायाँ) र सत्यभामा माथेमा। माथेमा प्रथम महिला न्यायाधीश हुन्। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराविरूद्ध नेपाल बार एसोसिएसन, पाँच पेसागत संगठन र बृहत नागरिक आन्दोलनले बिहीबार 'न्याय मार्च' आयोजना गरेको थियो।
सहभागीहरू सर्वोच्च अदालतबाट बालुवाटार जान तम्तयार रहेकै बेला सेतै कपाल फुलेका दुई महिलाको प्रवेश भयो।
ती दुईमध्ये एक जना महिला त्यहाँ उपस्थित हुनुले नै न्यायालयमा एक महिनादेखि जारी आन्दोलनको निम्ति खास अर्थ राख्थ्यो।
ती महिला थिइन् सत्यभामा माथेमा जो नेपालकी पहिलो महिला न्यायाधीश हुन्।
र, अर्की थिइन् सुकन्या वाइवा। उनी लेखक पारिजातकी बहिनी हुन्।
(हेर्नुहोस्: राजा वीरेन्द्रलाई भन्न चाहन्थें 'हिँड्न सक्ने भएरै लामो यात्रामा निस्केकी हुँ सरकार')
प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध जारी आन्दोलनमा ८० वर्ष काटेकी पूर्वन्यायाधीश माथेमालाई देख्दा नेपाल बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ निकै भावुक भए।
'प्रधानन्यायाधीशले सिंगो न्यायालयको जनविश्वास दाउमा राखेर नैतिकताहीन काम गरेको देखेपछि सबैलाई असह्य भइरहेको छ। यो अवस्थामा उहाँ (सत्यभामा) लाई हाम्रो आन्दोलनमा देखेर म एकदमै खुसी भएँ,' उनले भने, 'न्यायालय बचाउने नेपाल बारको आन्दोलनमा यसको गरिमा र मर्म बुझेका मान्छे जोडिनुले ठूलो अर्थ राख्छ।'
माथेमालाई नेपाल बारले यो र्‍यालीमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थिएन। श्रेष्ठका अनुसार उनी स्वतस्फूर्त अरू नागरिकझैं न्याय मार्चमा हिँड्न आएकी थिइन्।
यी दुई महिलालाई अघि लगाएर न्याय मार्च बार परिसरबाट अघि बढ्यो।
सर्वोच्च परिसरबाट भद्रकालीसम्म माथेमा र वाइवा न्याय मार्चमा सामेल भए। 'स्वतन्त्र न्यायालय जिन्दावाद' भन्ने नारा लगाउँदै अघि बढेका आन्दोलनकारीहरूलाई उनीहरूले भद्रकालीसम्म साथ दिए। त्यसपछि उनीहरू घर फर्किए।
उक्त मार्च 'भ्रष्ट प्रधान्यायाधीश राजीनामा दे', 'भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च छोड' जस्ता नारा लगाउँदै बालुवाटारसम्म पुगेको थियो।
बालुवाटार पुगेपछि शिल्पी नाटकघरका कलाकारहरूले 'न्यायको खोजी' भन्ने नाटक देखाए। नाटकमा 'असन्तुलित न्यायको तराजु' प्रदर्शन गरिएको थियो। तराजुको एउटा तलोमा पैसा चढ्छ, अर्कोमा न्याय खोज्न आएकाहरूको मर्मस्पर्शी आवाजको चित्कार सुनिन्छ। त्यो चित्कारका अगाडि पैसाको तलो भारी हुँदै जान्छ।
नाटकले कानुन व्यवसायीहरू भावुक भए। उनीहरू रूनु न हाँस्नुको मुडमा देखिन्थे। तै उनीहरूले ताली बजाए।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यस्तै घटना दिनहुँ अदालतमा देखिरहेकाले नाटक हेरेजस्तै नलागेको बताए। र्‍यालिपछि आयोजित कोणसभा सञ्चालन गरेका उनले मञ्चबाट भने, 'हामीले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्दा जस्तो देख्छौं, यो नाटकले न्यायालयको त्यस्तै अवस्था देखाएको छ।'
कोणसभाकै क्रममा कानुन व्यवसायीलाई अगाडि राखेर युवा कवि भूमिका चौधरीले 'न्याय खोज्न हिँडेको यात्री' नामक कविता सुनाइन्।
आफू अन्यायमा पर्दा जाने ठाउँ अदालत हो भन्ने उनलाई थाहा थियो। तर प्रधानन्यायाधीश नै न्यायको किनबेच गर्छन् भन्ने कुरा सुनेपछि मन आन्दोलित भयो।
उनले भनिन्, 'बिहान घरबाट हिँडेदेखि आन्दोलित मनले लेखेको कविता हो यो।'
अर्का कवि संगीता उराँवले पनि 'न्याय नपाउँदा कस्तो हुन्छ हजुर!' भन्ने कविता सुनाएकी थिइन्।
नाटक र कवितापछि कोणसभालाई पाँचै पेसागत संगठनका प्रतिनिधिले सम्बोधन गरे।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले न्यायालय बिचौलिया र तस्करहरूको फन्दामा परेको टिप्पणी गरे।
'न्यायालयलाई बिचौलियाले घेरेका छन्। जनताको न्यायालय बन्नुपर्नेमा तस्करहरूको न्यायालय भएको छ। न्याय पैसा हुनेले पाउने अवस्था बनेको छ,' उनले भने, 'सिंहदरबार त पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचार र विकृतिले भरिएको छ, अहिले न्यायालयमा समेत पस्यो। न्यायमा हुने विकृति अन्त्य नभई हामी समृद्धिमा जान सक्दैनौं।'
नेपाल शिक्षक महासंघकी कमला तुलाधरले न्यायबारे आफूले सानैमा सुनेको एउटा उखान सुनाइन्- नेपालको कानुन दैवले जानुन्!
'ठूलाबडाले यसो भन्दा सानोमा अर्थ बुझ्दिनथेँ,' उनले भनिन्, 'अचेल न्यायालयको हालत देखेर बुझ्न थालेकी छु। हामी आमनागरिकलाई न्यायको भरोसा दिने अदालतमा बिचौलियाको राज र विसंगति अब अन्त्य हुनुपर्छ। न्यायमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन अब ढिला गर्नु हुन्न।'
पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष रमेश विष्टले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेरलाई महाअभियोग नलगाएर राजनीतिक दलहरूले जनमतको घोर अपमान गरेको बताए। प्रधानन्यायाधीशलाई पहिले महाअभियोग र पछि भ्रष्टाचारमा जेल पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'म यो नाटक र कवितामा भएका भाव सुनेपछि लज्जित भएँ। लोकतन्त्रको आधार भनेको न्यायपालिका हो। त्यही न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने चोलेन्द्रशमसेर अहिले बिचौलियाको नाइके भएका छन्। मलाई हाम्रो देशमा चोलेन्द्रजस्ता प्रधानन्यायाधीश भएकोमा लाज लाग्छ।'
'अन्यत्र भ्रष्टाचार भए सजाय दिलाउन जाने सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने चोलेन्द्र छन्, उनैले सुधारको भाँडोमा बिर्को लगाएका छन्,' उनले भने, 'त्यसैले चोलेन्द्र रहँदासम्म न्यायालय सुधार हुन्न। उनलाई हटाएपछि बल्ल न्यायपालिकाको सुधार सुरू हुन्छ।'
आफुहरूले राजनीतिक दललाई चोलेन्द्रशमसेरलाई महाअभियोग लगाउने १७ तथ्य बुझाएको उनले बताए।
बालुवाटारको पिपलबोटमा उभिएर उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गर्दै भने, 'न्याय किनबेच गर्ने चोलेन्द्रको बहिर्गमन राजीनामाबाट हुन्छ कि महाअभियोग लगाउनुपर्छ। बालुवाटारमा तपाईंकै छिमेकमा रहेको प्रधानन्यायाधीशलाई निकाल्ने संवैधानिक दायित्व अब तपाईंकै हो, निर्वाह गर्नुहोस्।'
सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया लागू भएको जानकारी दिँदै उनले चोलेन्द्रशमसेरका नाउँमा व्यंग्य कसे, 'गोलाप्रथा लागू भइसकेको छ। अब ज-जसले मुद्दा मिलाउन पैसा दिएका छन्, त्यो पैसा फिर्ता माग्नेको लर्को लाग्ने छ। पैसा लिन बाँकी हुनेले अर्को आन्दोलन गर्ने छन्।'
सबैको भाषणपछि बृहत नागरिक आन्दोलन तर्फबाट नारायण वाग्लेले महिनादिनसम्म न्यायालय ठप्प हुँदा पनि चोलेन्द्रशमसेरलाई केही गर्न नसक्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको आलोचना गरे।
'जुन राजीतिक दलहरूलाई हामीले नेपाल रूपान्तरण गर राज्यप्रणाली बदल भन्ने जिम्मेवारी दिएर पठाएका थयौं सिंहदरबारको सिंडि चढेपछि उनीहरू जंगबहादुर राणा बने । उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन हाम्रो आन्दोलन जारी छ,' उनले भने।
महिनादिन न्यायालय ठप्प हुँदा न्यायालयको समस्या न्यायालयले नै सम्हालोस भन्ने नेताहरूलाई उनले पालैपालो सम्बोधन गरे।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उनले भने, 'अदालतले बुढानिलकण्ठमा सुतिरहेका व्यक्तिलाई पानी छम्केर बालुवाटारमा ल्यायो ती एकमहिनासम्म बालुवाटारमा सुतेको सुतै छन्। त्यसरी सुतिरहने हो भने भने बुढानिलकण्ठ फर्किए हुन्छ।'
उनले केपी ओलीलाई संकेत गर्दै भने, 'अर्का नेता अहिले नारायणी किनारमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूका साथमा हुनुहुन्छ। अहिले न्यायालयको मूलतत्व न्याय हराउँदा पनि, विचौलिया विसंगतिका एक एक मुद्दा छरपस्ट हुँदा पनि उहाँले भनिरहनुभएको छ फैसला गर्ने सबैले राजिनामा देउ भन्दै न्यायपालिकाको आफ्नो भूमिका विर्सिने नेतालाई भन्न चाहन्छु यही सोच्ने हो भने तपाईं काठमाडौं नफर्के हुन्छ। नजिकै देवघाट छ नारायणी किनारबाट तपाईं देवघाट जानुहोस्।पाँच लाख कार्यकर्ताबाट एक-एक रूपैयाँ उठाए सुनको कमण्डलु किन्न पुग्छ।'
यी सबैका भाषण सुनेर सडकमा टुक्रुक्क बसेका थिए, सबभन्दा पुराना वकिल ९५ वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारी। उनी पनि महिना दिनदेखि जारी नेपालबारको आन्दोलनमा दिनदिनै सहभागी हुँदै आएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै करिब एक महिनादेखि न्यायालय आन्दोलित छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् भने नेपाल बार एसोसिएसनले दिनहुँ सर्वोच्चकै गेटअगाडि उनीविरूद्ध नाराबाजी गरिरहेको छ। चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले पनि चोलेन्द्रशमसेरले राजीनामा नदिए उनीविरूद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्दै विज्ञप्ति निकालेका छन्।
भिडिओ: सुसन चौधरी/सेतोपाटी
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ९, २०७८, १२:१५:००